ihe omume ime mgbatị ahụ zuru oke | Bezzia
Susana godoy | 06/04/2021 16:00 | Mmega ahụ
Ọ bụrụ na ịmaghi ebe ị ga-amalite na mgbatị ahụ, anyị na-enyere gị aka na ya. N'ihi na ọ bụ eziokwu na oge ụfọdụ anyị na-amalite ịme usoro, ịzụ naanị otu akwara na ihe dị mma bụ na anyị nyefere onwe anyị n'ọtụtụ, ma ọ bụ gbanwee ha na ụbọchị ma ọ bụ na ọzụzụ, dịka ịchọrọ. You chọrọ ịma omume ime mgbatị ahụ?
N’ezie otutu n’ime ha ka ima mara, mana anyi ga agwa gi n’ime ndi nwere ike zuo oke maka gi. Ya mere, ị ga-enwe ike ịhapụ ọzụzụ gị kpamkpam ma ọ bụ dị ọhụrụ, na ịmara nke ahụ site na ole na ole ị ga-emega ahụ dum. Ọ bụghị otu n’ime nnukwu echiche? Ọfọn, echefula ihe niile na-eso ya.
1 Mgbasa agha, mmega ahụ maka ubu
2 Sere azụ maka azụ
3 Bench pịa n'etiti omume ị ga-eme mgbatị ahụ
4 Na-emega azụ na ụkwụ gị na onye nwụrụ anwụ
Mgbasa agha, mmega ahụ maka ubu
Ikekwe n'ụlọ ị nweghị oke ma ọ bụ ihe ntụchi, yabụ otu mmemme ị ga-eme na mgbatị ahụ bụ nke a. Ọ gbasara ndị agha agha ga-eme ka anyị nwee ubu. Ọ bụ ezie na azụ ga-etinyekwa aka n'ụzọ ụfọdụ. Iji mee nke a, anyị nwere ike iburu ụfọdụ ibu ma ọ bụ dumbbells na aka ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike inyere onwe gị aka na mmanya ma debe diski na njedebe ọ bụla. Nke a ga - enyere gị aka ibuli ibu dị gị mkpa. Mmega ahụ gụnyere idobe ikpere aka, na-echekwa aka na ọkwa obi, ịkwaga ịkwalite ogwe aka n'elu isi, na-eru ịgbatị ha. Ọ bụ ihe ntụgharị dị elu nke anyị ga-enweta n'ọtụtụ nkwughachi.
Sere azụ maka azụ
O nwekwara ike ịbụ na ị nwere ngwaọrụ maka ha na mgbidi ụlọ gị, ọ bụ ezie na mgbatị ahụ anyị ga-agwa gị na ị ga-eme ya. N'agbanyeghị Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị rịọrọ na-enwe ike na-arụ ọrụ azụa, nwekwara ọtụtụ ndị nkatọ. Maka na ọ naghị adị mfe mgbe niile inweta ha. Site na mgbe ha pụtara, mgbe ahụ ị ga-ahụ na nke na-esote ga-aka mma karịa nke gara aga na mkpali, ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ bụ mmega ahụ zuru oke n'ihi na ogwe aka na ọbụna isi ga-esonyekwa na ya.
Bench pịa n'etiti omume ị ga-eme mgbatị ahụ
Ee, ọ bụ otu n'ime ama ama na nke zuru oke. Ebe ọ bụ na nke a anyị ga-egosipụta pectoral yana ubu. Iji mee nke a, anyị ga-edina na azụ anyị na bench. Mgbe ahụ, tinye ụkwụ gị nke ọma na ala, mee nkwekọrịta gị ma debe scapulae gị. Iji buru ogwe na ibu anyị ga-agbadata na elu nke sternum ma ọ bụ obere ala. mgbe anyị ruru ya, anyị ga-agaghachi na ala ya na nkwalite, mana ee, ọdịda ga-adị nwayọ nwayọ. Iku ume na itinye uche ga na-eso anyị oge niile ka ị ghara ịda mbà.
Na-emega azụ na ụkwụ gị na onye nwụrụ anwụ
Ee, ọ bụ onye ọzọ dị ukwuu na-achọghị ịhapụ mmemme mmega a. Ma azụ, hip ma ọ bụ lumbar yana ụkwụ ga-ata ahụhụ mmega ahụ nke onye nwụrụ anwụ. Nwere ike ime ya ma jiri dumbbells na mmanya, dịka nhọrọ gị si dị. Ka anyị ji ogwe aka wedata ibu, aga agbaghari ụkwụ, ebe a na-edobe azụ ya ọtọ, anyị ana-agbadokwa ahụ n'ihu. Ma icheta na ị ga-akwapụ obi gị, ka ị ghara ịkwanye mmanya ahụ n'ihu. Anyị ga-ewere ya na ahụ dị ka o kwere mee iji zere ịmegharị nke nwere ike imebi azụ anyị.
N'okwu a, na mgbakwunye na ụkwụ, anyị ga-arụkwa quadriceps na n'ezie, akụkụ lumbar. Ya mere, ọ bụ ihe ọzọ na greats anyị nwere na ndụ anyị na otu ihe omume ime na mgbatị. Ọ bụ ihe atụ ọzọ doro anya na anyị ga-eme ka azụ anyị kwụ ọtọ, ebe ụkwụ ma ọ bụ ikpere anaghị emeghe nke ukwuu. Ikwesiri izere nke ahụ mgbe ị na-agbada ihie ụzọ nke ijikọ ikpere gị ma ọ bụ ịmegharị oke. N'ihi ya, anyị kwesịrị ịgbanwe ibu dị ka anyị nwere ma ọ bụ obere omume.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Mmega ahụ » Omume ime mgbatị ahụ zuru oke